Naadiga Chelsea ayaa maanta ceyriyey tababarahooda Frank Lampard kadib guuldarooyin… – Hagaag.com
Posted on 25 Janaayo 2021 by Admin in Sports // 0 Comments
Naadiga Chelsea ayaa maanta oo Isniin ah ku dhawaaqay inay ceyrisay tababaraheeda Frank Lampard ka dib markii uu la kulmay 5 guuldarro sideed kulan oo Premier League ah, taasoo keentay inay kooxdu u dhacdo kaalinta 9aad ee 20ka koox ee horyaalka.
Maalqabeenka reer Russia Roman Abramovich oo ah milkiilaha kooxda reer London ayaa wuxuu yiri “kani wuxuu ahaa go’aan adag, waxaan xiriir aad u wanaagsan oo shaqsi ah la leeyahay Frank, waxaanan u hayaa ixtiraam weyn.”
“Waa nin aad u sharaf badan oo leh heerka ugu sareeya ee anshaxa shaqada,” laakin duruufaha jira awgood ayaa lama huraan ka dhigtay in la bedelo” ayaa lagu yiri bayaanka.
Wararka ka imanaya Ingiriiska ayaa sheegaya in tababarihii hore ee Paris Saint-Germain Thomas Tuchel uu yahay musharaxa ugu dhow ee la filayo inuu la wareega shaqada, isagoo bedelaya Lampard, ciyaaryahankii hore ee England ee xirfadiisa tababrnimo ka bilaabay Chelsea 2019.
Xilli ciyaareedkiisii ​​ugu horreeyay (2019-2020), Lampard wuxuu Chelsea ku hogaamiyay semi-finalka League, sidoo kale wuxuu gaaray Final-ka England Cup. Laakiin ma uusan gaarin natiijooyinkii la rabay xilli ciyaareedkan inkasta oo ay kooxdu ku bixisay in ka badan 220 milyan oo ginni (300.94 milyan oo doolar) qandaraasyo cusub.
Lampard ayaa noqday tababarihii 12-aad ee hogaamiyay kooxda kubada cagta ee naadiga Chelsea tan iyo markii lahaanshihiisii ​​loo wareejiyay bilyaneerka Ruushka 2003.